Dadka aan bixin lacagta TVga maxaa ku dhacaya? | Somaliska
Maxay la kulmayaan dadka aan dhiibin lacagta TVga ee ay qaado Radiotjänst? Waxba, sida ay qortay wakaalada wararka TT. Dadka aan dhiibin lacagta laysanka TVga iyo Radiyaha ee loo yaqaan (licensavgifter) ayaan waxba dambi ah lagu soo oogin. Sanadkii la soo dhaafay ayaa Radiotjänst waxay dacweysay 41 qof oo keliya.
Dadkaas lagu dacweeyay booliska ayaa la sheegay in 1 la ganaaxay inta kalena faraha laga qaaday. Dadka Sweden ku nool ee gaaraya 9 milyan ayaa la sheegay in 350,000 oo keliya ay dhiibeen lacagta TVga. Marka laga reebo 3% ayaa dhamaan dadka Sweden ku nool waxaa laga rabaa in ay bixiyaan lacagta.
RadioTjänst ayaa si ay dadka lacagta uga hesho waxay u soo diraan waraaqo, mararka qaar telefoonka ayay ka soo wacaan ama way soo booqdaan guryaha.
heheheheheh filimka ayaaba iga qosliyay waa tabtaas dadkoo dhami siday uyaqaanin ban kayaabay
wallahi waxay igu dileen Qosolka
Somali badan oo waxan arkay dhaheyso Jag har ingen TV. Men de ljuger. Waa ceb in qofka caqiiso aan la sinin.- Dadka xaqiiqdo iska bixiya bishii dhan wa 173 kron wax wayn ma ahan. Xaqa la idinka rabo aya ka wayn